Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Njem nlele ọgwụ mgbochi ọrịa: Ọ dị mma, ọ dị njọ ma ọ bụ enweghị mmasị?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Oge na-egbu oge ma ọ bụ ụkọ ọgwụ mgbochi COVID-19 na mba ụfọdụ na-eduga ndị njem njem gaa ebe ndị ọzọ.
Njem nlegharị anya nke ọgwụ mgbochi na -ewelite ajụjụ gbasara ahaghị ọgwụ mgbochi.
Njem nlegharị anya nke ọgwụ mgbochi ọrịa na -abawanye nkewa n'etiti ndị ọgaranya na ndị na -enwechaghị ihe ùgwù.
Ndị kacha baa ọgaranya na mba ndị dara ogbenye nwere ike nweta ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihi na ha nwere ike ịme njem.
Njem njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ebe ebe ndị njem nlegharị anya na-enye ọgwụ mgbochi COVID-19 n'oge ezumike iji dọta ndị ọbịa, bụ mma agha nwere ihu abụọ dịka, ebe ọ nwere ike nyere aka ịmalitegharị njem, ọ na-ewelite ajụjụ gbasara ịha nhatanha ka ọ ga-abawanye nkewa n'etiti. ndị bara ọgaranya na ndị nwere obere ohere.
Nnyocha ndị ahịa Q2 2021 ụlọ ọrụ chọpụtara na ọ bụ naanị 6% nke ndị na-aza ajụjụ n'ụwa niile anaghị enwe nchegbu maka mmetụta COVID-19. 94% fọdụrụnụ nwere 'oke', 'ntakịrị' ma ọ bụ 'ihe' dị oke mkpa. N'ịbụ ndị nwere oke nchegbu, ọtụtụ ejirila ohere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Oge na-egbu oge ma ọ bụ ụkọ ọgwụ mgbochi COVID-19 na mba ụfọdụ na-eduga ndị njem njem gaa ebe ndị ọzọ.
Ndị kacha baa ọgaranya na mba ndị ka daa ogbenye ga -ebu ụzọ nweta ọgwụ mgbochi dịka ha nwere ike ime njem. Nke a na -ewelite arụmụka na mba ndị na -akwalite njem nlegharị anya ọgwụ mgbochi nwere ike inye onyinye oke ọgwụ mgbochi kama inye ndị njem bara ọgaranya ohere.
N'ezie US steeti, Russia, Maldives na Indonesia bụ ụfọdụ ebe na -enye ndị njem nleta ọgwụ mgbochi ugbu a. Agencylọ ọrụ njem ụfọdụ ewerela ohere ịkwalite ngwugwu njem ọgwụ mgbochi dịka ụzọ iji bulie ego ha ga enweta. N'ime Russia, dịka ọmụmaatụ, izu atọ njem nlegharị anya ngwugwu dị n'etiti US $ 1,500 ruo US $ 2,500, ewezuga ọnụahịa tiketi ụgbọ elu, gụnyere ịgba ọgwụ mgbochi. Agbanyeghị, na ọtụtụ ebe ụwa niile ka na -alụ ọgụ maka obere ọgwụ mgbochi, nke a na -ewelite ajụjụ gbasara ịha nhatanha.
Dị ka data ọhụrụ si kwuo, Democratic Republic of Congo na -enye ọgwụ mgbochi 3.5 n'ime mmadụ 1,000 ruo 25 Ọgọst 2021. N'iji ya tụnyere, US enyela ọgwụ mgbochi ọgwụ 1,115 n'ime mmadụ 1,000 n'otu ụbọchị ahụ. Nke a na -egosi na enweela nnukwu oghere n'etiti mba dị iche iche, a na -ahapụkwa ọtụtụ.
Otu ihe dị mma maka njem nlegharị anya bụ na ọ nwere ike rụọ ọrụ na ịmalitegharị njem mgbe ọrịa COVID-19 butere ngalaba ahụ na ikpere ya. Ọpụpụ mba ofesi gbadara site -72.5% afọ -afọ (YoY) na njem ụlọ site na -50.8% YoY, dịka data ọhụrụ siri dị. Nke a na -egosipụta oke ọrịa na -efe efe na ihe kpatara ebe ụwa niile ji achọsi ike ịmalitegharị njem.